Indlu yeeNdwendwe yaBucala enephuli yangaphakathi kunye nebhafu eshushu
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguArt
Yiza uhlale kwindlu yethu yeendwendwe yabucala ekwiihektare ezi-2 ezinendawo yokupaka eyaneleyo ngaphandle kwesitalato kunye nemithi emikhulu yomthunzi. Ifakwe imizuzu eli-10 ukusuka edolophini eWalla Walla kunye nemizuzu emi-2 ukusuka kwiYunivesithi yaseWalla Walla, indlu yethu enegumbi elinye lokulala yeendwendwe eyadi yayo yabucala. Unyaka wonke uyonwaba kwiphuli yangaphakathi kunye nebhafu eshushu. Owu, kwaye uya kufumana i-intanethi ekhawulezayo apha.
Relax kumqolo ongasemva kunye nemibono yeeNtaba zeBlue. Nandipha
** Uhlaziyo lwentsholongwane kukhuseleko lwakho. Siyiphucule inkqubo yethu yokucoca. Sihlamba izandla zethu amaxesha amaninzi phambi nangexesha lokucoca le ndlu yeendwendwe. Yonke imiphezulu icocwa ngokucokisekileyo kusetyenziswa izisombululo ezicetyiswayo ze-CDC zokubulala intsholongwane ye-corona. Oku kuquka zonke izibambo, izixhobo zokubala, iitafile, imiqolo yesitulo, iitafile ezisecaleni kwebhedi, amaqhosha engcango kunye neremote yeTV. Zonke iibhedi kunye neetawuli ziyahlanjwa kwaye zihlanjwe. Zonke izitya ziqhutywa kwi-dishwasher kwimowudi ethi "sanitize".
Sifuna ukuba ungaziva nje ukhululekile kwaye ukhuselekile apha, kodwa UKHUSELEKILE apha.**
Le yindlu yeendwendwe ephangaleleyo. Ibandakanya igumbi lokulala elinamagumbi, indawo yokuhlala enombono, kunye negumbi lokuhlambela elitsha kraca elineshawari yeglasi engqukuva yobutofotofo. Kukho iwasha kunye nesomisi. Ikhitshi eligcweleyo libandakanya isitovu, ifriji, imicrowave kunye nomatshini wokuhlamba izitya. Uya kufumana iTV enescreen esikhulu esiqhagamshelwe kwiRoku enoqhagamshelo lwe-intanethi olukhawulezayo. Iifestile zijonge ngaphezulu kwetafile yepatio kunye nezitulo, kunye neyadi enkulu enemfihlo entle. Izilwanyana zasekhaya zamkelekile.
Abasebenzisi bezithuthi zombane: Sinikezela ngesikhululo sokutshaja seNqanaba le-2 50-amp (iplagi ye-NEMA 14-50).
4.88 out of 5 stars from 496 reviews
4.88 · Izimvo eziyi-496
Indawo yaseKholeji yidolophu ezolileyo eyunivesithi. Sibekwe kwindawo ezolileyo yeehektare ezi-2 kumda wedolophu, uhambo lwemizuzu emi-5 ukuya eDyunivesithi. Luhlobo lwendawo ekhuselekileyo apho abantu abaninzi bangazitshixi iingcango zabo ebusuku. I-Andy's Market ikwiibhloko ezimbalwa kude - enemveliso entsha ebalaseleyo yalo lonke uhlobo. Zonke ii-wineries zentlambo kunye nokungcamla kwewayini kukumgama omfutshane.
Ngokunokwenzeka siya kuba kwindawo ngexesha lokuhlala kwakho. Siza kusebenzisana nawe kuphela kangangoko ufuna. Sichulumancile kukwamkela iindwendwe kunye nokwabelana ngobubele bethu, kodwa siyavuya ukukubonelela nje ngesetingi yabucala.
Ukuba sikhona xa ufika siyakubulisa kwaye sikubonise indawo yokuhlala. Ukuba ufika apha ngexesha esingakwazi ngalo ukwenza loo nto siya kukunika imiyalelo yendlela yokungena, indawo yokupaka, njl.
Ngokunokwenzeka siya kuba kwindawo ngexesha lokuhlala kwakho. Siza kusebenzisana nawe kuphela kangangoko ufuna. Sichulumancile kukwamkela iindwendwe kunye nokwabelana ngobubele bet…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- College Place